Guddiyada, Guddiyada iyo Golayaasha - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Nagu saabsan|Guddiyada, Guddiyada iyo Golayaasha
Guddiyada, Guddiyada iyo Golayaasha
Kuraasta ganacsiga ama kuraasta ku leh dhowr guddi-goboleed oo madax-bannaan, guddiyo iyo goleyaal. Waxaan sidoo kale siinaa shaqaale iyo taageero maamul hay'adahaan iyo kuwa kale ee ku qoran midigta.
Gudiga La-talinta Guryaha ee La Awoodi Karo (AHAB)
Guddiga La-talinta Guryeynta ee Gobolka Washington (AHAB) waxay kala talisa Waaxda Ganacsiga arrimaha guryaha iyo guryaha la xiriira. AHAB waxay leedahay 22 xubnood oo matalaya danaha kaladuwan ee laxiriira guryaha la awoodi karo. Sagaal iyo toban waxaa magacaabay Guddoomiyaha muddo afar sano ah.
Gobolka Guddiga Soo nooleynta Dhaqaalaha Bulshada (CERB) waxay maalgelisaa hagaajinta kaabayaasha dadweynaha ee dhiirrigeliya horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Tusaalooyinka qaar ee mashaariicda waxaa ka mid ah buundooyinka, waddooyinka, biyaha iyo nidaamyada bullaacadaha, jidadka tareennada, isgaarsiinta, adeegyada iyo tas-hiilaadka dekedda.
Kooxda Wada Shaqeynta ee Daryeelka Carruurta
The Kooxda Wada Shaqeynta ee Daryeelka Carruurta (CCCTF) waxaa abuuray Sharci dejinta Gobolka Washington ee 2018 (SHB 2367) si loo horumariyo siyaasadaha iyo talooyinka lagu dhiirrigelinayo daryeelka carruurta ee loo-shaqeeyaha uu taageero iyo in la horumariyo helitaanka daryeelka carruurta iyo awood u siinta shaqaalaha.
Golaha Naafada Koritaanka (DDC)
The Golaha Naafada Horumarinta ee Gobolka Washington (DDC) waxay ku taalaa gudaha Adeegyada Bulshada iyo Guriyeynta Qeybta Ganacsiga, laakiin waa hay'ad gooniya oo madax banaan oo uu magacaabay Gudoomiyaha Gobolka. DDC waxay waxbartaa oo la talisaa siyaasad dejiyeyaasha maxalliga, gobolka iyo federaalka ee mowduucyada la xiriira nidaamyada u adeega ragga naafada ah, haweenka iyo carruurta ku nool Washington.
Waxaa la abuuray 1985, the Guddiga Howlaha Guud ee Gobolka Washington waxay maamushaa Xisaabta Kaalmada Hawlaha Guud ee gobolka. Hadafka Guddiga Howlaha Guud waa inuu taageero dhaqaale iyo mid farsamo siiyo bulshada Washington si loo helo caafimaad guud, badbaado, iyo kaabayaasha deegaanka si loo taageero bulshada iyo muhiimadda dhaqaale.
Golaha Dib-u-habeynta Gobolka oo dhan
The Golaha Dib-u-habeynta Gobolka oo dhan waxaa loo sameeyay 2016 si loo wanaajiyo amniga guud iyo natiijooyinka shakhsiyaadka dib ugu soo laabanaya bulshada.
Ku guuleysiga Guddi Khibrad Nololeed Wanaagsan (ABLE)
The Gobolka Washington Awood guddiga maamulka waxaa taageera Adeegyada Bulshada iyo Qeybta Ganacsiga ee Guriyeynta, laakiin waa maamul goboleed gaar ah oo madax-bannaan oo xubnaha guddiga uu magacaabo Guddoomiyaha Gobolka. Qorshaha keydinta ee ABLE wuxuu u oggolaanayaa dadka naafada ah iyo qoysaskooda inay keydsadaan kharashaadka mustaqbalka iyaga oo aan luminin waxtarka gobolka iyo kan federaalka.
Sanduuqa Aruurinta Deeqda Naafada ee Horumarinta (DDETF)
The Sanduuqa Aruurinta Awqaafta Naafada (DDETF) guddiga maamulka waxaa taageera Adeegyada Bulshada iyo Qeybta Ganacsiga ee Guriyeynta, laakiin waa dowlad gaar ah oo madaxbannaan xubnaheeda guddiga waxaa magacaaba Guddoomiyaha Gobolka. DDETF waa kalsooni baahi gaar ah oo ka caawisa sameynta keydinta mid fudud oo ay awoodi karaan shaqsiyaadka naafada ah.
Guddiyo badan iyo Guddiyo ay taageerayaan Shaqaalaha Ganacsigu
Kooxda Shaqada Naafada
Guddiga La-talinta Sanduuqa Maal-gashiga Dhaqaalaha ee Hanford
Guddiga La-talinta Goobaha Madadaalada ee Dhalinyarada
Xafiiska Guddiga La-talinta Dhallinyarada Guri la'aanta ah
Xoogagga Gobolka ee Hawlaha Ka-ganacsiga Dadka